Homeसमाचारज्ञानेन्द्र शाहीलाई राजावादी भनेपछि पत्रकार संग पर्यो च’र्काचर्की, रामकुमारी झाँक्रीको झाँ’को झारे (भिडियो सहित)
March 16, 2021 admin समाचार 2620
सामाजिक अ’भियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई धेरैले राजाबादी भन्ने आरो’प लगाउँदै आईरहेका छन् । यद्यपी उनले भने यो केवल आ’रोपकालागी आ’रोप मात्र भएको बताउँदै आफु राजा’बादी नभएको बताएका छन् । उनले एक अन्तरवार्तामा प्रश्नकर्ताले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिंदै आफु राजाबादी न’भएको बताएका हुन् । ‘मैले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नारा लगाएको देख्नु भएको छ ? मैले कहि’ल्यै राजा नै चाहिन्छ भनेर भनेको सुन्नु भएको छ ?’ शाहीले भने ।
अभि’यन्ता शाहीले नेतृ राम कुमारी झाँक्रि प्र’क्राउ परेको विषयलाई मिडिया र राजनीतिक दलले प्रा’थमिकता दिएको भनेर त्यसको चर्को विरोध गरे । उनले भने,‘यो लोकतन्त्रमा कति&जना जनताहरु पक्राउ परे त्यति’बेला कहाँ गएकी थिईन् राम कुमारी झाक्रि ? अनि के हेरेको थियो मिडियाले र किन केही बो’लेनन् विभिन्न राजनीतिक दलहरुले ?’ शाहीले अगाडी भने,‘आज राम कुमारीलाई प्रहरीले समा’त्यो भनेर देशै उचाल्ने ? के अरु नेपाली जनता राम कुमारी जस्तै यो देशका नाग’रिक हैनन् ?’
शाहीले प्रधानमन्त्री ओलीको पनि आलो’चना गर्न पछि परेनन् । उनले यो देशमा ओली प्रधान’मन्त्री भएर के गरे भन्ने प्रश्न गर्दै भने,‘प्रधानमन्त्री ओली भएर देश र जन’ताकोलागी के भएको छ ? शेर बहादुर प्रधानमन्त्री भएर के भयो ? प्रचण्डको त कुरै नगरौं । यो देश अहिले केवल ओली’मय र प्रचण्डमय बनेको छ ।’ शाहीले योभन्दा अगाडी पनि प्रधानमन्त्रीको चर्को आ’लोचना गर्दै आईरहेका थिए । उनले वर्तमानदेखि पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु समेतले यो देशकोलागी केही नग’रेको बताए । – इताजा खबरबाट
August 30, 2020 admin समाचार 11446
December 30, 2020 admin समाचार 4908
June 19, 2021 admin समाचार 1311
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (205255)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (196636)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (191945)